नेतृत्व चयनको कांर्यभार कार्यकर्तालाई सुम्पेका छौंः अध्यक्ष ओली Esimana.com || Simana Media Pvt. Ltd.
इसीमाना सम्वाददाता २०७८ मंसिर ७ गते ०८: ३७ मा प्रकाशित 272 पटक पढिएको
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको दशंैँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको कार्यभार प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताको भएको बताएकाउनु भएको छ । अध्यक्ष वा कुनै पनि पदमा अरुलाई नउठ्न भनेर आफूले कसैलाई दबाब नदिने बताउनु भयो ।
पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्भमा आज सो पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागद्वारा सम्पादकहरुसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले “हाम्रो मतदाता घटेको छैन । केही मान्छे बिग्रिएर पार्टी छाडेर गए । त्यसयता सयौँको पार्टी प्रवेशले पार्टीलाई थप बलियो बनेको छ । हाम्रो काम नेताहरुको व्यवस्थापन मात्रै होइन, मुख्य काम देश बनाउने कुरा हो ।” आउने निर्वाचनबाट एमाले नै सरकारमा आउने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष ओलीले देश बनाउने नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु गत विधान महाधिवेशनले पारित गरिसकेकाले यो महाधिवेशनले मुख्य रुपमा नेतृत्व निर्माणको काम गर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– “यसपल्ट मूलरुपमा उक्त नीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने छनौटको अभिभारा महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई सुम्पदै छौं । मुलुकको वर्तमान अवस्स्था के हुन् र अब, देशलाई कुन नीति र आधारका साथ अगाडि लान सकिन्छ भन्ने बारेमा नेतृत्व निर्माण महाधिवेशनको मुख्य कार्यसूची छ ।’
तपाईंलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने स्थितिमा केही चुनौती आएको हो ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– “एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसमा कुनै प्रकारको जोरजुलुम छैन । म उठ्ने–नउठ्ने टुङ्गो गरेको छैन । त्यसैले मलाई अध्यक्षमा छोड्न वा चुनौती दिन पाइन्छ । अरुलाई नउठ्न दबाब दिन्नँ । म अध्यक्ष भएमा पार्टीमा सबैलाई समान व्यवहार गर्छु ।” अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले अध्यक्षमा उठ्छु भनेर आफूलाई चुनौती नदिएको बरु आफूप्रति आदार, सम्मान, स्नेह दिनभएको भनाई राख्नुभयो । रावलको स्नेहपूर्ण सुझावबाट आफू प्रभावित भएको बताउनुभयो ।